स्पष्टिकरणले एकतामा भाँजो हालेको नेपाल पक्षको आरोप
July 21, 2021 N88LeaveaComment on स्पष्टिकरणले एकतामा भाँजो हालेको नेपाल पक्षको आरोप
काठमाडौँ । एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी एक हुनुपर्नेमै जोड दिएको छ । सो पक्षको बुद्धनगरमा बसेको बैठकले पार्टी एकतामा जोड दिएको नेताहरुले बताएका छन् । बैठकले पार्टीले आफूहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्ने तथा पुत्ला जलाउने कार्यक्रम रोकेर एकताको प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्ने माग रोखेको छ । सो पक्षले स्पष्टिकरणले एकतामा भाँजो गरेको समेत […]
माधव नेपाल र भीम रावलबीच भेटवार्ता, के भयो छलफल ?
July 21, 2021 N88LeaveaComment on माधव नेपाल र भीम रावलबीच भेटवार्ता, के भयो छलफल ?
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावलबी भेटवार्ता भएको । उनीहरुबीच रावल निवास टोखामा छलफल भएको हो । उनीहरुबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको विषय, रावलको राजीनामा तथा पार्टीको विवाद लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । नेपाल पक्षमै एकताको विषयमा मतभेद हुँदा र पार्टीको संस्थागत निर्णयबाट मात्रै […]
काँग्रेसका अमरेश कुमार सिंहले दिए प्रतिनिधिसभा सांसद पदबाट राजीनामा
July 21, 2021 N88LeaveaComment on काँग्रेसका अमरेश कुमार सिंहले दिए प्रतिनिधिसभा सांसद पदबाट राजीनामा
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सांसद अमरेश कुमार सिंहले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन् । काँग्रेसका नेता सिंहले आजै पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनले पार्टी दलाल, दारुभट्टि चलाउने, ठेकेदारी गर्नेको हातमा गएको बताउँदै राजीनामा दिन लागेको बताए । त्यस्तै पार्टीको क्रियाशिल सदस्यता, समायोजनलगायतमा पार्टीभित्र चलखेल भएको भन्दै आफ्नो गम्भीर आपत्ति रहेको उनले बताए । आफूले बीपीलाई […]
July 21, 2021 N88LeaveaComment on थप २ हजार ८३८ जनामा कोरोना संक्रमण, ३० को मृत्यु, १४ सय १५ निको
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ हजार ८३८ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । गत २४ घण्टामा थप २ हजार ८३८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ६ हजार ६२८ र एन्टिजेन विधिबाट ३ हजार एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा २ हजार ८३८ जनामा संक्रमण देखिएको हो […]
काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत आवमा एक हजारभन्दा बढी फर्म तथा कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ । विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापमा संग्लन भएका एक हजार ३५ व्यापारिक फर्म÷कम्पनी तथा उद्योग कारवाहीमा परेका हुन् । एक वर्षको अवधिमा विभागले दुई हजार ९४७ फर्मको अनुगमन […]
July 21, 2021 N88LeaveaComment on सावधान ! चीनमा भेटियाे काे’राे’ना भन्दा खतरनाक अर्काे भाइरस, महामारीकाे खतरा
एजेन्सी । को’रो’ना भाइरस (Covid-19) को महामारीकाबीच चीनमा फेरि अर्को एक नयाँ भाइरस फेला परेको छ । जसको संक्रमणका कारण एक जनाको मृत्यु भइसकेको छ । कोरोना भाइरसको विषयलाई लिएर चीनमाथि विभिन्न प्रकारका आरोपहरु लागिरहेका बेला प्राणघातक अर्को मंकी बी भाइरस (Monkey B Virus) को संक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको खबर बाहिरिएपछि दुनिया भरमा त्राश […]
भारतमा फोन जासुसी, तरंग नेपालसम्म खास कुरा के हाे ?
July 21, 2021 N88LeaveaComment on भारतमा फोन जासुसी, तरंग नेपालसम्म खास कुरा के हाे ?
काठमाडौं । राजनीतिकर्मी, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञ, पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीको समेत फोन जासुसी गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि भारतमा चर्को विवाद सिर्जना भएको छ । दिल्ली मिसनमा रहेका चीन, इरान, पाकिस्तान र नेपालका राजदूतको समेत फोन ह्याक भएको खबरले नेपाललाई सशंकित बनाएको छ । इजरायली कम्पनी एनएसओले बनाएको स्पाइवेयर (जासुसी सफ्टवेयर) पेगाससमार्फत संसारभर करिब ५० हजार फोनको जासुसी […]
सन्दिप लामिछानेकाे भिसा अवैध भएकाे ठहर
July 21, 2021 N88LeaveaComment on सन्दिप लामिछानेकाे भिसा अवैध भएकाे ठहर
काठमाडौं । ईंग्ल्याण्डमा टी-२० क्रिकेट लिग खेल्न हुन गएका नेपाली स्पिनर सन्दीप लामिछाने एउटा पनि खेल नखेली नेपाल फर्किएका छन् । ईंग्ल्याण्ड क्रिकेट बोर्डले उनको भिसा अवैध भएको भन्दै तत्काल नेपाल फर्किन आदेश दिएको थियो । बोर्डको चेतावनीपछि हिजै बेलुकी नै सन्दीप ईंग्ल्यान्डबाट नेपालका लागि उडेका हुन् । उनी भोलि काठडमाडौं ओर्लिने सन्दीपका म्यानेजर रमण […]
अन्तत: फुटने भयो एमाले , यस्तो छ आन्तिम तयारी
July 21, 2021 N88LeaveaComment on अन्तत: फुटने भयो एमाले , यस्तो छ आन्तिम तयारी
काठमाडाैं । सरकारबाट केपी ओली बाहिरिएसँगै एमालेभित्रको घर झगडा साम्य हुनुको साटो झन् विस्फोट भएको छ । कतिपय एमाले नेताहरूले सरकार ढलेपछि पार्टीमा एकता हुने सोचेका थिए । तर, सरकारबाट ओलीको बहिर्गमनसँगै एमालेको अन्तरविरोध घट्नुको साटो झन् बढेको छ । बालुवाटार छाडेर बालकोट पुगेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले अर्का नेता माधवकुमार नेपाललाई गद्दार घोषणा गर्दै माफी […]
दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन सरकार तयार, माधव नेपालले गरे यस्तो तयारी
July 21, 2021 N88LeaveaComment on दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन सरकार तयार, माधव नेपालले गरे यस्तो तयारी
काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले निर्णय दिन नसक्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा नेपाल पक्षको निर्णयबिना हतार नगर्ने पक्षमा छन्। यसो त एमाले एकता पनि अन्यौ’लमा परेको छ। नेपाल समूहले अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए मात्र पार्टी एकता हुने बताउन थालेको छ। तर, सत्तापक्षमा रहेको राजनीतिक दलले माधव […]